Kushambadzira Campaign Kuronga Yekutarisa: 10 Matanho Ekukwirira Mhedzisiro | Martech Zone
Sezvo ini ndichiramba ndichishanda nevatengi pamishandirapamwe avo ekushambadzira uye zvirongwa, ini ndinowanzoona kuti pane zvipenga mumakambani avo ekutengesa izvo zvinovatadzisa kusangana nepamusoro pevangakwanise. Zvimwe zvakawanikwa:
Kushaikwa kwekujeka - Vashambadzi vanowanzo wanda matanho murwendo rwekutenga izvo zvisingape kujeka uye zvinotarisa pachinangwa chevateereri.
Kusava negwara - Vatengesi vanowanzoita basa rakakura kugadzira mushandirapamwe asi vanoshaya chakakosha - kuudza vateereri zvavanofanira kuita zvinotevera.
Kushaya humbowo - kusanganisa humbowo, zvidzidzo zvemakesi, ongororo, ratings, humbowo, tsvagurudzo, nezvimwewo kutsigira fungidziro yemushandirapamwe wako.
Kusava nekuyera - kuona kuti une nzira yekuyera nhanho imwe neimwe mumushandirapamwe uye nemhedzisiro yayo.
Kushaikwa kwekuyedzwa - ichipa imwe mifananidzo, misoro yenyaya, uye zvinyorwa zvinogona kupa kukwidziridzwa kwakawedzera pamushandirapamwe.
Kusava nekubatana - vashambadziri vanowanzoita mushandirapamwe musilo pane kurongedza mamwe masvikiro avo nematanho ekusimudzira mushandirapamwe.
Kushaya kuronga - zvese… dambudziko hombe nemishandirapamwe yakawanda inokundikana iri nyore - kushomeka kwekuronga. Izvo zviri nani iwe kutsvagisa uye kuronga wako wekushambadzira mushandirapamwe, zvirinani mhedzisiro ichave iri.
Ndanga ndichigadzira iri-inoda kudhijitari yekushambadzira kosi pamwe neyunivhesiti yedunhu kubatsira mabhizinesi kuita matanho ekukunda aya maburi. Izvo zvinoenderana nehurongwa hwandakagadzira kune vedu vese vatengi vakanyorwa mifananidzo mune yedu Agile Kushambadzira Rwendo.
Pamwe chete nerwendo, ndinoda kuti mabhizimusi nevashambadziri vagare vaine maitiro kana vakagara pasi kuronga chero chiito. Ndakadaidza iyi yekutarisa iyo Kushambadzira Campaign Kuronga Yekutarisa - hazvina kuganhurirwa kumishandirapamwe, ndezve zvese zvekushambadzira zvaunoita, kubva paTweet kuenda kune anotsanangura vhidhiyo.
Chinangwa chekutarisa hachisi chekupa rakanyatso nyorwa zano. Zvakawanda sevashandi vezvemabara vanoshandisa cheki cheki kuona kuti havasi kupotsa nhanho, bhizinesi rako rinofanirawo kuisa chinyorwa chega chega mushandirapamwe kana wekushambadzira waunoshandisa.
Heino runyorwa rwemibvunzo inofanirwa kupindurwa ose kushambadzira chirongwa.
Kushambadzira Campaign Kuronga Yekutarisa:
Chii vateereri yemushandirapamwe wekushambadzira uyu? Kwete chete ndiani… chii chinosanganisira ivo, ivo munhu, danho ravo murwendo rwekutenga, uye kufunga nezve kuti mushandirapamwe wako uri pamusoro sei pamakwikwi evanokwikwidza.
Varipi vateereri yemushandirapamwe wekushambadzira uyu? Vateereri ava vanogara kupi? Ndeapi masvikiro uye nzira dzaunofanirwa kushandisa kuti unyatsosvika kune vateereri vako?
Ndezvipi zviwanikwa uyu mushandirapamwe wekushambadzira unoda kupihwa? Funga nezve vanhu, maitiro, uye mapuratifomu aunoda kushandisa kubata mushandirapamwe zvinobudirira. Pane here maturusi anogona kukubatsira kuwedzera mibairo yako?
Uchapupu hupi unogona here kuisa mumushandirapamwe wako? Shandisa makesi, zvipupuriro zvevatengi, zvitupa, ongororo, ratings, tsvagurudzo ... ndeipi yechitatu-bato kusimbiswa iwe yaunogona kuisa kuti ukunde chero nyaya dzekuvimba nezve rako brand kana kambani kuti ikusiyanise iwe kubva kumakwikwi ako?
Pane zvimwe zvekuedza iwe zvaunogona kuratidzira pamwe nekuwedzera zviwanikwa izvi? Kana iwe urikugadzira whitepaper, une blog blog, yeruzhinji hukama pombi, yakagadziridzwa blog post, kugovana munharaunda, kukurudzira kufambisa ... ndeapi mamwe masvikiro nemikana inogona kuverengerwa kuti iwedzere kudzoka kwako pamushandirapamwe wako wekudyara?
Ndiyo kudana-ku-kuita zvakanyatsoratidzwa? Kana iwe uri kutarisira yako tarisiro yekutora chero chiito, ita shuwa yekuvaudza zvekuita zvinotevera uye kumisikidza tarisiro pazviri. Pamusoro pezvo, iwe unogona kufunga nezve mamwe maCTA kana vasina kugadzirira kuita zvizere panguva ino.
Ndedzipi nzira dzaunogona kubatanidza nadzo kudzokorora vateereri vako? Yako tarisiro inogona kunge isiri kugadzirira kutenga nhasi… unogona kuzviisa murwendo rwekurera? Wedzera ivo kune yako email runyorwa? Kuita macampaign ekusiya ngoro kwavari? Kufunga nezve maitirwo aungaita vateereri vako kunokubatsira kuita mhinduro zvisati zvanyanyisa.
Tichaita sei chiyero kuti chirongwa ichi chakabudirira here? Kupinza mapikisheni ekutsvagisa, ma URL emushandirapamwe, kuteedzera kwekutevera, kuteedzera zviitiko… kuwedzera zvese zvema analytics kuti unyatsoyera mhinduro yauri kuwana pamushandirapamwe wako kuti unzwisise kuti ungavandudza sei.
Kusvika papi zvinotora here kuona kana chirongwa ichi chiri kubudirira? Kangani kaunoshanyirazve mushandirapamwe wako kuti uone kana kuri kushanda kana kwete, paungangoda kuuraya kana kuigadzirisazve kana kuigonesa ichifambira mberi.
Chii chatakaita dzidza kubva pachirongwa ichi chekushambadzira chinogona kushandiswa kune chinotevera? Une raibhurari yemushandirapamwe yakanyatsorongedzwa iyo inokupa matipi ekuvandudza mushandirapamwe wako unotevera? Kuva neruzivo rwekuchengetedza kwakakosha kusangano rako kuitira kuti urege kudzikanganisa kana kuuya nemamwe mazano pamushandirapamwe unotevera.
Kushambadzira kune zvese nezve kuyerwa, kukurumidza, uye kusimudzira kwekuvandudza. Pindura iyi gumi mibvunzo neese mushambadziro wekushambadzira uye ini ndinovimbisa iwe uchaona yakagadziriswa mhedzisiro!
Kushambadzira Campaign Kuronga Yekutarisa
Ndinovimba unonakidzwa nepepa rekushandira paunenge uchienderera mberi nezvako, ndiudze kuti zvakakubatsira sei!
Dhawunirodha Yekushambadzira Campaign Planning Check
Tags: Vateererichecklistdownloadfree downloadMarketingmarketing campaignkushambadzira mushandirapamwekushambadzira mushandirapamwe kuronga kuongororayekutengesa yekutarisakushambadzira chirongwaPDFpdf kurodha pasi
Imagga: Iyo API yeMufananidzo Kuzivikanwa Kusanganiswa Inotungamirwa neArtificial Intelligence
Sep 28, 2017 na5: 27 PM
Yakanaka kwazvo Doug - chakakura chishandiso (kuti ini ndimbotsvaira uye tweak !!)
Mar 1, 2021 pa 4: 44 AM
Changamire mungakumbira here kupa mahara digital kushambadzira internship?
Mar 1, 2021 pa 11: 10 AM
Mhoro Sampada, ndine hurombo asi handina nguva kana zviwanikwa zvekuita izvi!